I-Vine Suites- Indawo yeDowntown - I-Airbnb
I-Vine Suites- Indawo yeDowntown
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Shelby Gradel
U-Shelby Gradel Ungumbungazi ovelele
Itholakala ku-106 Schiller Street, i-The Vine Suites iqhele ngezinyathelo nje ezimbalwa ukusuka ezindaweni zokudlela, idepho yesitimela, inqola, izindawo zewayini, izitolo, iminyuziyamu, nokuningi.
Indawo enamakamelo amabili iyikotishi lesimanje elinombhede wenkosi, ikhishi eligcwele, i-gazebo yangasese, nendawo yokupaka ngaphandle komgwaqo. Uzothola konke okudingayo ukuze wenze ukuvakasha kwakho kuqedele.
I-Vine Suites inikwe amandla ngokungena okungenakhiye futhi ikhodi yakho yokufinyelela izothunyelwa kuwe ngaphambi kokufika kwakho, okwenza ukungena kuheleza umoya. Ulwazi lokufinyelela i-Vine Suites Wi-Fi izotholakala ekhishini le-suite. Ngaphezu kwalokho sinezitolo zekhofi ezi-2 endaweni ehamba ngezinyawo, nezitolo eziningi zokudlela eziseduze.
Itholakala maphakathi nedolobha Esifundeni Somlando.
Ibungazwe ngu-Shelby Gradel
Sizibophezele ekuhlinzekeni ukuhlala okuhle kuzo zonke izivakashi. Sicela uzizwe ukhululekile ukushayela noma ukuthumela umbhalo ngesikhathi sokuvakasha kwakho uma kufanele ube nemibuzo noma udinga usizo.
UShelby Gradel Ungumbungazi ovelele